Ardaydu waxay Arduino ugu abuuraan xirmo si ay ugu abuuraan kuraasta curyaamiinta korontada ku shaqeeya | Qalabka bilaashka ah
Ardaydu waxay xirmo la sameystaan ​​Arduino si ay u abuuraan kuraasta curyaamiinta korontada ku shaqeeya
Muddo dhawr bilood ah, kooxo dhawr ah iyo adeegsadayaasha sameeya ayaa baadhitaan iyo horumarin ku samaynayey sida loo abuuro kuraasta korantada leh Qalabka Bilaashka ah si qalabkan, oo muhiim u ah, uu yahay wax fudud oo la helo oo aan qaali ahayn sida ay hadda u dhacdo.
Kooxda ardayda ayaa wacday steampunk1577 waxay ku guuleysatay inay sameyso xirmo ay la socoto Arduino oo ku beddelanaya kursiga curyaamiinta caadiga ah ee curyaamiinta curyaamiinta korontada ku shaqeeya, wax waxtar badan u leh kuwa aan heli karin qalab noocan ah.
Kooxda ardaydu waxay samaysteen xirmo lagu dhejin karo curyaamiin kasta oo curyaamiin ah waxayna u beddelaysaa kursi curyaan koronto ku shaqeeya. Dhammaan waxaa loogu talagalay 500 Dollar, Qiimo ka jaban kuraasta curyaamiinta korontada dhabta ah, inkasta oo ay macquul tahay in ay ka qaalisan tahay haddii aan annaga lafteena dhisno.
Matoorrada ku jira xirmadan waxaa loo daabacay si ay u abuuraan kuraasta curyaamiinta korontada ku shaqeeya ee fudud
Qalabkani wuxuu ku saleysan yahay saxan Arduino UNO kaas oo xakameeya oo fuliya amarada dhaqdhaqaaqa ee aan bixinno. Kadib, Arduino UNO Thanks to tamarta batteriga, waxay dhaqaajineysaa matoorrada daabacan ee aan dhigno kursiga curyaamiinta. Mootooyinkan waxaa loo daabacay sida inta kale ee Qalabka Qalabka Bilaashka ah iyo aaladaha ka kooban xirmadan waxaa loo heli karaa si gooni gooni ah kuwa gacanta badan oo doonaya inay iyagu dhisaan. Labada xirmo iyo dhammaan macluumaadka ku saabsan xirmooyinka Arduino labadaba waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo Steampunk1577 bogga rasmiga ah.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ama dhibcaha wanaagsan ee Qalabka Bilaashka ah ayaa ah ku dabbaqiddeeda maalin kasta ama walxaha lagama maarmaanka ah oo caadiyan leh qiime aad u sarreeya laakiin waxaa loo dhisi karaa qiimo jaban. Kursiga curyaamiinta ee korontada ku shaqeeya waa tusaale fiican laakiin waxaa jira kuwa kale sida aaladda kontoroolka loogu talagalay astaamaha wajiga, sanaaciyo daabacan, iwm ... Wax dad badan caawiya, xitaa haddii aanaan ka warqabin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » Ardaydu waxay xirmo la sameystaan ​​Arduino si ay u abuuraan kuraasta curyaamiinta korontada ku shaqeeya
Alfredo Rodriguez Couto dijo
Sida iyo meesha aad wax ka iibsan karto Ma inaan aniga lafteyda rakibo? Ma lagu rakibi karaa kursiga curyaanka ee isku laaban?
Waxaan ku noolahay Orense, SPAIN.
Jawaab Alfredo Rodriguez Couto
Daabacaha ugu weyn ee 3D ee Yurub ayaa lagu soo saari doonaa Vigo
RaspiReader, akhristaha sawirka faraha ee adeegsada Raspberry Pi 3